Mako 1:15—“Umambo hwaMwari Hwaswedera” | Mavhesi eBhaibheri, Zvaanoreva Uye Zvakaapoteredza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Bislama Bulgarian Cebuano ChiTetun Dili Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Edo Efik Estonian Fijian Finnish Frafra French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kannada Kikongo ya Leta Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Norwegian Oromo Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Samoan Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tsonga Turkish Tzotzil Ukrainian Valencian Vietnamese Waray-Waray Yoruba
Mako 1:15—“Umambo hwaMwari Hwaswedera”
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Mako 1:15—“Umambo hwaMwari Hwaswedera”
“Nguva yakwana, uye Umambo hwaMwari hwaswedera pedyo. Pfidzai zvivi zvenyu, mutende mashoko akanaka.”—Mako 1:15, Shanduro yeNyika Itsva.
“Nguva yazadziswa, ushe hwaMwari hwaswedera pedyo; tendeukai, mutende vhangeri.”—Mako 1:15, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona.
Zvinorehwa naMako 1:15
Jesu Kristu akataura kuti Umambo hwaMwari * hwakanga “hwaswedera pedyo,” nekuti iye aizova Mambo weUmambo ihwohwo uye akanga achitova navo panguva iyoyo.
Jesu aisareva kuti Umambo hwakanga hwatotanga kutonga. Pava paya, akazotaura nevadzidzi vake achivaudza kuti Umambo hwaizouya munguva yemberi. (Mabasa 1:6, 7) Asi iye zvino nguva yakanga yataurwa neBhaibheri kuti aizoonekwa saMambo yakanga yasvika. * Ndosaka aigona kutaura kuti: “Nguva yakwana,” kureva nguva yekuti atange ushumiri hwake hwekuparidza evhangeri, kana kuti mashoko akanaka, nezveUmambo.—Ruka 4:16-21, 43.
Kuti vanhu vabatsirwe nemashoko akanaka eUmambo, vaifanira kupfidza, kureva, kuzvidemba pamusoro pezvivi zvavakaita, vorarama maererano nemitemo yaMwari. Vaya vaipfidza vairatidza kuti vaitenda mumashoko akanaka eUmambo hwaizouya.
Mavhesi akapoteredza Mako 1:15
Jesu akataura mashoko aya achangotanga ushumiri hwake muGarireya. Mateu 4:17 ichitaura nezvenyaya iyi inotiwo “kubvira panguva iyoyo,” Jesu akaparidza nezveUmambo hwaMwari. Umambo ndihwo hwaiva dingindira reushumiri hwake. Umambo hunototaurwa kanopfuura ka100 muEvhangeri ina, kakawanda kacho mumashoko akataurwa naJesu pachake. MuEvhangeri * idzodzo, Jesu akataura nezveUmambo hwaMwari kupfuura zvaakaita dzimwe nyaya.
Verenga Mako chitsauko 1 pamwe chete nemashoko emuzasi, mavhesi anoenderana nearimo, uye tarisa mapikicha nemepu irimo.
^ ndima 3 Umambo hwaMwari ihurumende iri kudenga yakagadzwa naMwari kuti iite kuda kwake panyika. (Dhanieri 2:44; Mateu 6:10) Kuti unzwe zvakawanda, verenga nyaya yakanzi “Chii Chinonzi Umambo hwaMwari?”
^ ndima 4 Jesu aifanira kutanga agadzwa samambo kuti aite mabasa ake saMesiya, mumiririri waMwari anokosha. Jesu aifanira kutanga agadzwa samambo kuti aite mabasa ake saMesiya, mumiririri waMwari anokosha. Kuti unzwe zvimwe nezveuprofita hweBhaibheri hunotaura nezvaJesu saMesiya, verenga nyaya yakanzi “Jesu Ndiye Mesiya Anotaurwa Muuprofita Here?”
^ ndima 6 Mabhuku eevhangeri, ndiwo mabhuku 4 ekutanga eMagwaro echiKristu echiGiriki, ayo anowanzodanwa kunzi Testamende Itsva, uye anotaura nezveupenyu hwaJesu uye ushumiri hwake.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mako 1:15—“Umambo hwaMwari Hwaswedera”
Mako 1:15 Inotsanangurwa—“Umambo hwaMwari Hwaswedera”
ijwbv nyaya 1